चुनाव बाहिस्कार कहिले सम्म? – Sanghiya Online
चुनाव बाहिस्कार कहिले सम्म?
Posted on : May 16, 2017 May 16, 2017 - No Comment
पहिचान बादीहरु जहिले पनि चुनाव बाहिस्कार मात्र गर्छौं! बाहिस्कार कहिले सम्म? मेरो बुझाईमा स्थानीय चुनाव बाहिस्कार नगरेकै राम्रो हो। तल्लो तह भनेको वार्ड, गाउंपालीका, नगरहरु हुन। जे जति भए पनि अग्नी परिक्षा लिने एक सुनौलो समय हो, कहाँ कमि कमजोरी छ, त्यो थाहा पाउन सकिन्छ र त्यो कमजोरी सच्याउने जमर्को गर्नु पर्छ।
यो स्थानीय चुनाव वाहिस्कार गर्नु भनेको आफैंलाई कमजोरी ठानीनु हो। आखीर यो स्थानीय चुनावले संबिधान लेख्ने, संसोधन गर्ने र राष्ट्रीय स्तरको कुनै योजना वा सत्ता पलट गर्ने होइन। यो चुनाव भनेको स्थानीय जन प्रतिनीधीत्व गर्ने मात्र हो। स्थानीय जनचाहाना र स्थानीय विकाशको लागी जन प्रतिनीधीत्व गर्ने मात्र हो। कुनै सिंह दरबारमा चलखेल गर्न जाने चुनाव होईन। तसर्थ आफ्नो स्थानीय पकड कति छ? जनमत कति छ भन्ने जान्ने मौका यहि हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो संबिधान सभामा बैद्य बाको मोहनी जाल झेलको कारण पहिचान बादी सबै गोलखाडी गईयो, चुनाव बाहिस्कार गरि छाड्यौं, फाईदा कस्लाई पुग्यो त? त्येहि पहिचान बिरोधी हरुलाई फाईदै फाईदा भयो भोटनै नकाटिए पछि फाईदा त हुनेनै भयो क्यार। दोस्रो संबिधान सभाको चुनाव बाहिस्कार गरेर हामीले के पायौं र के गुमायौं यस्को लेखाजोखा गर्नु पर्छ। दोस्रो संबिधान सभा बाहिस्कार गरे बापत नाईके बैद्य बाले के गर्नु भो र कस्तो भुमिका खेल्नु भो यस्को हेक्का राख्न जरुरी छ। नेपालको संबिधान जारी हुंदा नाईके बैद्यले एक शब्द चुं बोलेनन्। भित्र भित्रै आरामको सासफेरेर बसे, यो मानेमा पहिचान बादीहरुले अन्तिममा थाहा पाए कि बैद्यले हामीलाई थाङ्गनामा मस्त सुताएछन।
त्येतिन्जेल सम्ममा ढिलो भइसकेको थियो। अब उप्रान्त यस्तो नहोस। हारे पनि जिते पनि यो स्थानीय चुनाव हो भिडौं! कि त पार भईन्छ, नभए वारी नै वसौंला!! फेरी पार गर्ने कोशिस गरौंला। चुनाव बाहिस्कार कहिले सम्म? स्थानीय चुनाव बाहिस्कार गर्नु भनेको स्थानीयलाई बेवास्ता गर्नु हो। स्थानीय पकड नै बलियो छैन भने त्यो भन्दा पछिको कुरो गर्नु बेकार हुन्छ। स्थानीय चुनावमा दुई चार ठाउंमा जित भएमा त्येहि बाट नमुना देखाउदै लाने हो। नमुना देखाउने मौका मिल्ने हो। आज नभए पनि भोलीको बाटो त अवश्य खुल्ने छ। तसर्थ चुनावमा आजै देखि होमीन थालौं। नेताहरुलाई झकझकाउने कोशीस गरौं।
निर्लज्ज र अपराधि भारतले पाकिस्तानीलाई लाश उपहार पठायो ! थुईक्क नामर्द भारतीय शासक
मध्य-मधेश र मधेश प्रदेशको यस्तो छ अर्थ, आन्दोलन बाकि छ सन्देशको लागि कुन उप्युक्त ?